မြန်မာသတင်းစုံ – Page 51 – Welcome MMREPUBLIC
ဖူးမြော်စဉ်မှာ မျက်နှာတော်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ ထူးခြားတန်ခိုးကြီးမားတဲ့ မော်လမြိုင်က စေတီတော်
မော်လမြိုင်မြို့ဟာ အေးချမ်းသာယာတဲ့ မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်ပြီး တန်ခိုးကြီး ဘုရားတွေများပြား တည်ရှိရာ ဒေသ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် တန်ခိုးကြီးဘုရားတွေထဲက စေတီတစ်ဆူဖြစ်တဲ့ ဦးဇိနစေတီတော်ဟာ မော်လမြိုင်မြို့ အရှေ့ဖက် တောင်ရိုးပေါ်မှာ တည်ရှိတဲ့ စေတီတော်တစ်ဆူ ဖြစ်ပါတယ်…. စေတီတော်ရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဆိုရမယ်ဆိုရင် ရှေးမြန်မာမင်းများ လက်ထက်က မော်လမြိုင် (ရမ္မာဝတီ) ကို မင်းကြီး ဥဇနာ (ဦးဇိန) ကအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်…မင်းကြီး ဥဇနာဟာ တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ စေတီဟောင်းတစ်ဆူကို ပြုပြင်ခဲ့ပါတယ်… ထိုစေတီကိုလည်း ဦးဇိနစေတီ ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး တောင်ကုန်းကိုလည်း ဦးဇိနတောင်လို့ Read more
ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရ်ှကို မှောက်အောင် ထိုးသွားမယ်လို့ အောင်လအန်ဆန်းကြုံးဝါး
ပရိသတ်ကြီးရေ လာမယ့် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရ်ှတို့ရဲ့ ONE Championship ပွဲစဉ်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမှာ ပြုလုပ်သွားမှာပါ…. အောင်လအန်ဆန်းဟာ ဝိတ်တန်း ၂ ခုရဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်….ခုသူ့ရဲ့ သူ့ရဲ့မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံဘွဲ့ကို ဘစ်ဒက်ရ်ှက စိန်ခေါ်တာကြောင့် ကာကွယ်ပွဲအဖြစ် ထိုးသတ်ရတော့မှာပါ…… South China Morning Post ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ အောင်လအန်ဆန်းဟာ ပြိုင်ဘက်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်…ဒါ့အပြင် ဘစ်ဒက်ရ်ှကို ထိအောင်ထိုးနိုင်ရင် သူမှောက်သွားမှာမို့လို့ Read more
ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျရတော့မယျ့ ဖွူဖွူထှေးနဲ့ ရုပျရှငျကနျတော့ပှဲပုံရိပျမြား
စိတျသဘောကောငျးပွီး မနောဖွူသူလေးမို့ ပရိသတျတှရေဲ့ခဈြခွငျးမတ်ေတာတှကေို ပိုငျဆိုငျထားတဲ့ ဖွူဖွူထှေးက သူမဖွဈခငျြတဲ့ အိပျမကျတှကေို ကွိုးစားရငျး အနုပညာလောကထဲမှာ နာမညျရလာသူတဈ‌ယောကျပါ။ ကွိုးစားမှုတှကွေောငျ့ ဝဖေနျမှုတှကေနေ အခဈြတှပွေောငျးလဲသိအထိ အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတဲ့ ကွျောငွာမငျးသမီးလေးတဈယောကျပါ။ အခုဆိုရငျ အနုပညာလောကထဲကို ဝငျရောကျလာပွီဖွဈတဲ့ ဖွူဖွူထှေးက သရုပျဆောငျပိုငျးမှာ ဘယျလိုတှေ အရညျအခငျြးရှိလညျးဆိုတာ မွငျတှရေ့တော့မှာပါ။ ခွလှေမျးမှနျမှနျတဲ့ ကွိုးစားခဲ့တဲ့ ဖွူဖွူထှေးရဲ့ ကွိုးစားမှုတှကေ လကျရှိမှာတော့ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာ ပါဝငျသရုပျဆောငျခှငျ့ရခဲ့ပါပွီ‌နျော။ မကွာခငျမှာ ရိုကျကူးတော့မယျ့ “မ အက်ခရာ”ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာ ဖွူဖွူထှေးကို ပရိသတျတှမွေငျတှရေ့‌တော့မှာပါ။ မနကေ့ ကငျြးပခဲ့တဲ့ “မ အက်ခရာ”ရုပျရှငျဇာတျကားကွီး Read more
ဘဝမှာ နထေိုငျခငျြတဲ့ပုံစံကို ရငျဖှငျ့ပွောပွလိုကျတဲ့ နနျးစန်ဒာလှထှနျး
ပရိသတျကွီးရေ နနျးစန်ဒာလှထှနျးကတော့ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ဇာတျလမျးတှဲ ဖွဈတဲ့ ဘယျဇာတျရုပျမဆို သဘာဝကကြ ပီပွငျအောငျ စိတျနှဈ ရိုကျကူးတတျတဲ့ သူမကတော့ Miss World Myanmar ( 2015 ) Second Runner Up အလှမယျတဈဦးပဲ ဖွဈပါတယျ။နနျးစန်ဒာလှထှနျးလို့ ပွောလိုကျတာနဲ့ ရဝေတီလေးလို့ တနျးမွငျကွမယျထငျပါတယျနျော။ ရဝေတီလေးကတော့ “ ပဉ်စလကျရှာ ”ဇာတျလမျးတှဲကနေ ပရိသတျတှစေတငျသတိထားမိလာပွီး “ အရိပျ” ဇာတျလမျးတှဲမှာလညျး ပရိသတျတှေ ရငျထဲကို နာ့ဈဆရာမလေးသကျသကျ အဖွဈ စှဲထငျကနျြရဈစခေဲ့တဲ့ ဇာတျလမျးတှဲမငျးသမီးလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ “ဝင်ျကပါရှငျးတမျး” Read more
သပွကေုနျး အ.ထ.က ကြောငျးစာကွညျ့တိုကျအတှကျ သုတ၊ ရသ၊ အတ်ထုပ်ပတ်တိစာအုပျတှေ လှူဒါနျးခဲ့တဲ့ တငျမိုးလှငျ
တငျမိုးလှငျကတော့ အနုပညာလောကမှာ အစီစဉျတငျဆကျသူတဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို အပွညျ့အဝရရှိထားတဲ့ သူတဈယောကျပါ။အနုပညာလောကမှာ အရအေခငျြးရှိပွီး လငျးလတျတောကျပတဲ့ ကွယျပှငျ့လေးတှကေို မှေးထုတျပေးနတေဲ့ အနုပညာလောကရဲ့ အရေးပါလှတဲ့ ဆရာတဈဆူလို့တောငျဆိုရမှာပါ။ မကွာခဏဆိုသလိုလညျး လိုအပျတဲ့ နရောတှမှော အလှူအတနျးတှပွေုလုပျလရှေိ့ပွီး “တငျမိုးလှငျ ဖောငျဒေးရှငျ”ကိုလညျးတညျထောငျထားပါသေးတယျ။ဒီနေ့ ဖဖေျောဝါရီလ (၂၈)ရကျနမှေ့ာတော့ တငျမိုးလှငျဖောငျဒေးရှငျးအလှူလေးအနနေဲ့ သနျလငျြမွို့နယျ၊ သပွကေုနျး အ.ထ.က ကြောငျးစာကွညျ့တိုကျအတှကျ သုတ၊ ရသ၊အတ်ထုပ်ပတ်တိ စာအုပျပေါငျး(၁၂၅)အုပျ ပေးအပျလှူဒါနျးခဲ့ပါသေးတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ တငျမိုးလှငျကတော့ စာအုပျစာပမြေားတှကေနေ လူငယျတှစေံပွုထိုကျသော စံနမူနာကောငျးမြားရရှိနိုငျပွီး မွနျမာပွညျကွီးအတှကျ ပိုပွီးအရေးပါသော လူငယျမြားဖွဈဖို့ရနျ ရညျရှယျတာကွောငျ့ Read more
ဗဈတာလီဘဈဒကျရျှကို မှောကျအောငျ ထိုးသှားမယျလို့ အောငျလအနျဆနျးကွုံးဝါး
ပရိသတ်ကြီးရေ လာမယ့် ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့မှာ အောင်လအန်ဆန်းနဲ့ ဗစ်တာလီဘစ်ဒက်ရ်ှတို့ရဲ့ ONE Championship ပွဲစဉ်ကို အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာမှာ ပြုလုပ်သွားမှာပါ…. အောင်လအန်ဆန်းဟာ ဝိတ်တန်း ၂ ခုရဲ့ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အားကစားသမားတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ခုသူ့ရဲ့ သူ့ရဲ့မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံဘွဲ့ကို ဘစ်ဒက်ရ်ှက စိန်ခေါ်တာကြောင့် ကာကွယ်ပွဲအဖြစ် ထိုးသတ်ရတော့မှာပါ…… South China Morning Post ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ အောင်လအန်ဆန်းဟာ ပြိုင်ဘက်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ အသင့်ရှိနေပြီလို့ သိရပါတယ်…ဒါ့အပြင် ဘစ်ဒက်ရ်ှကို ထိအောင်ထိုးနိုင်ရင် Read more
ဆှေးရိပျသနျးစတေဲ့ နဝေငျခြိနျလေးမှာ မငျးလေးကို ခဈြလို့ သီခငျြးလေးကို လှမျးဆှေးဖှယျလေး သီဆိုထားတဲ့ မရေဲ့ ဗီဒီယိုဖိုငျလေး
ပရိသတ်ကြီးထဲမှာ အသံချိုချိုအေးအေးလေးနဲ့ အဆိုတော်မလေး မေကို မကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေရှိမယ်မထင်ပါဘူးနော်..။ သရုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ အနုပညာခြေလှမ်းတွေကို လုပ်ကိုင်လာခဲ့တဲ့ မေကတော့ အခုချိန်မှာ အသံအေးအေးလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အဆိုတော်မလေး ဖြစ်လို့နေပါပြီ..။ မေရဲ့ “မင်းလေးကို ချစ်လို့” ဆိုတဲ့ သီချင်းကို ပြန်လည်သီဆိုထားတဲ့ Version အသစ်ဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ နားထဲမှာ စွဲထင်ကျန်ခဲ့အောင် ကောင်းလွန်းလို့ မေ့အတွက်နော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တွေနဲ့ အားပေးမှုတွေကို စတင်ရရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးလို့ ပြောရင်လည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူးနော်..။ Read more
ဖူးမွျောစဉျမှာ မကျြနှာတျောပျေါလာခဲ့တဲ့ ထူးခွားတနျခိုးကွီးမားတဲ့ မျောလမွိုငျက စတေီတျော
အသံကောငျးလှနျးသူတှနေဲ့ ဆိုခဲ့တဲ့ အမှတျတရညလေးအကွောငျးကို မြှဝလောတဲ့ ဖွူဖွူကြျောသိနျး
နာမည်ကြီး အဆိုတော်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကိုတော့ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ ဖက်ရှင်ဘုရင်မလေးအဖြစ်နဲ့ ပရိသတ်တွေ ရင်းနှီးချစ်ခင်ပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်..။ အမြဲလို ဆန်းသစ်တဲ့ ဖက်ရှင်အမိုက်စားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို စပရိုက်ဖြစ်အောင် လုပ်တတ်တဲ့သူတစ်ဦး လို့ ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး..။ ဖြူဖြူကျော်သိန်းကတော့ ရင်ထဲထိစေမယ့် စာသားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ကို အမြဲထိအောင် ဆိုနိုင်တဲ့ အသံအားအကောင်းဆုံး အဆိုတော်လည်း ဖြစ်ပါသေးတယ်နော်..။ ဖြူဖြူက ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက်နေ့မှာတော့ သူမအတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ညလေးတစ်ညအကြောင်းကို “အသံသိပ်ကောင်းလွန်းလှတဲ့သူတွေနဲ့စုဆုံစားဆိုပုံရိုက် တင်ဖြစ်တဲ့တစ်ညဆိုပါတော့..။အယ့်လယ်” ဆိုပြီး အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့အတူ သူမရဲ့ Read more
မိနျးမတှအေတှကျ အမွဲလိုအပျတဲ့အရာလေးတဈခုအကွောငျးကို အကွံပေးပွောလာတဲ့ စံရတီမိုးမွငျ့
ပရိသတ်ကြီးရေ စကားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ချစ်ဖို့ကောင်းအောင် ပြောတတ်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး စံရတီမိုးမြင့်ကိုတော့ ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်..။ ကာရိုက်တာတိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်လတ်လို့ ပြောရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး..။ အချစ်ရေးမှာတော့ တစ်ယောက်တည်း အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ သူမချစ်တဲ့ အနုပညာအလုပ်တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း ပျော်ရွှင်စွာ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်..။ တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ အလှတွေ ပိုတိုးကာ လှလာတဲ့ စံရတီလေးဟာ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုလည်း ချစ်မြတ်နိုးတတ်သူလေးတစ်ယောက်ပါ..။ အလှပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ မိမိုက်နေတဲ့စာသားလေးတွေကို ရေးတင်တတ်တဲ့ စံရတီမိုးမြင့်လေးဟာ ဒီနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၈)ရက်နေ့မှာတော့ မိန်းမတွေ Read more